आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्ने ७ सृजनशिल तरिकाहरु « Khasokhas Follow @khasokhasmag
– मेरियाना खिडाकेल
आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्नाले सकरात्मकता बढ्छ। तनाव कम गर्न र समग्र भलाई हुन सहयोग पुग्छ । सहानुभूति, सम्बन्ध र कृतज्ञता यति मूल्यवान छ कि हामीले यो वर्ष जति पनि चुनौतिहरुको सामाना ग¥यौं, त्यस पछि त झनै यो महत्वपूर्ण हुँदै गईरहेको छ ।
सामुहिक चिन्ता हटाउन एकअर्कोको राम्रो कामको प्रशंसा पनि एकदमै जरुरी हुन्छ । एक अर्काको मूल्यांकन गर्नु पनि सामुहिक चिन्ता समाधानको उपाय हो । विज्ञानका अनुशार पनि आभार व्यक्त गर्नाले हाम्रो समृद्घी बढ्ने, चिन्ता कम हुने र समग्र विकासमा मद्दत पुग्ने हुन्छ ।
हामीले आभार व्यक्त गर्ने केही तरिकाबारे केही व्यक्तिका अनुभव शेयर गर्दैछौं ।
हस्तलिखित कार्ड पठाउनुहोस्
आफू आभारी रहेको देखाउन मैले अपनाउने एक तरीका भनेको हस्तलिखित कार्ड लेखेर तयार पारेर हुलाकबाट पठाउनु हो । मलाई थाहा छ कि हुलाकबाट केही व्यक्तिगत कुराहरु प्राप्त गर्दा यसले व्यक्तिको दिनलाई उज्यालो बनाउँदछ । त्यसैले म अरुलाई पनि खुसी पार्न चाहन्छु, जसको म कदर गर्दछु ।
-जुली स्मिथ, बरिष्ठ मार्केटिंङ् विशेषज्ञ, नर्थ क्यारोलिना
फोन वा सन्देश
आभार व्यक्त गर्ने अर्को सबैभन्दा उत्तम तरीका प्रोत्साहनको सानो सन्देश मार्फत पनिै हो । एक कल फोन, ई–मेल, टेक्स्टले अविश्वसनीय रुपमा सशक्तिकरण प्रदान गर्छ । हामी मध्ये धेरैजसोलाई अरुको प्रशंसा गर्ने र आभार व्यक्त बानी कम हुनसक्छ ।
धन्यबाद दिन वा धन्यबाद लिन कत्तिको महत्वपूर्ण छ भनेर हामी बिर्सन्छौं । यस्ता साना प्रयासहरुले एक अर्कालाई माथि उठ्न मद्दत पुग्छ ।
– थेरेसा लैम्बर्ट, पेशेवर प्रशिक्षक, क्यानडा
तपाई कसैको कदर गर्नु हुन्छ भनेर देखाउने सबैभन्दा राम्रो तरीका हो, उपहार दिनु । जब तपाई बिसन्चो हुनुहुन्छ वा जीवनमा केहि उत्सब मनाउँदै हुनुहुन्छ भने कोही कसैबाट एक्कासी उपहार पाउादा उर्जा भरिन्छ । म आफ्नो साथीहरु तथा परिवारको सामुहिक उपस्थितिमा सरपराइज दिन मन पराउँछु । यसबाट मैले उनीहरुको कति कदर गर्छु भन्ने देखिन्छ । थोरै उपहारको साथमा प्रेम र कृतज्ञता पठाउँदाको खुसी हो, यो ।
– एजेला नेकपील, कपीराईटर, फिलिपिन्स
बदलामा केही आशा नगरी सहयोग गर्नुहोस्
बदलामा कुनै अपेक्षा नगरी सहयोग गर्नुहोस् । मार्चको सुरुमा मलाई इटलीबाट फर्किएका एक विद्यार्थीबाट कोबिड १९ संक्रमण भयो । मलाई थाहा थिएन कि म कसरी आफ्ना लागि खाद्यान्न किनमेल गरौं ? एक हप्तासम्म मैले खाद्यान्न प्राप्त गर्न नसक्दा मेरो एक साथीले मेरा लागि ग्रोसरी सामान ल्याईदिने प्रस्ताव गरिन् । ग्रोसरीसँगै मैले सेतो गुलाबको सुन्दर गुच्छा पनि पाएँ । उनले मसँग त्यसको पैसा लिन पनि इन्कार गरिन् । बदलामा उनले यस्तै सहयोग अरुलाई पनि गर्न भनिन् । जुन मैले मेरा छिमेकी जेष्ठ नागरिकहरुलाई धेरै पटक गरेको छु ।
– सु पाल्मर कोन, बेलायत
साथीहरुको सानोसानो विवरण याद गर्नुहोस्
जब कसैले मेरो बारेमा ससाना कुरा सम्झन्छ, त्यो मेरा लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । म उनीहरुका लागि महत्वपूर्ण रहेछु भन्ने अनुभव हुन्छ ।
म तिनिहरुका लागि महत्वपूर्ण छु । हामी सबैले शेयर गरेका हुन्छौं की हामीलाई के मनपर्छ । के गर्दा हामी भावुक हुन्छौं ? हामी केलाई माया गर्छौ ? जस्ता कुराहरु कसैले याद गर्छन् भने उसले आफ्नो ख्याल गर्दोरहेछ, कदर गर्दे रहेछ भन्ने अनुभव हुन्छ ।
– फ्रांसेस्को ओनोराटो, एरिजोना
समुदायका व्यक्तिलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्
समुदायका लागि निस्वार्थ काम गर्ने कैयन व्यक्तिहरु हुन्छन् । त्यस्ता व्यवसायिहरु, संगठनहरु र समुदायका सदस्यहरुलाई धन्यवाद नोट पठाएर कृतज्ञता व्यक्त गर्न सकिन्छ । यसले अरुका लागि निस्वार्थ सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिहरुको मुहारमा मुस्कान ल्याउनसक्छ ।
– क्यारी म्याकेचरण, ओन्टारियो
स्थानिय फुड बैंक, पुस्तकालय या विद्यालयलाई सानोतिनो डोनेशन दिएर आभार व्यक्त गर्न सकिन्छ । कसैको बारेमा सोचिरहेको देखाउनका लागि उनीहरुका नाममा रक्तदान समेत गर्नसकिन्छ ।
– जेएस, मासाचुसेट्स